DHAGEYSO:- Qabiilka iyo Dhibtiisa – Sheekh Boqolsoon, Raximahullah | Voice Of Somalia
DHAGEYSO:- Qabiilka iyo Dhibtiisa – Sheekh Boqolsoon, Raximahullah
Posted on September 28, 2015 by Voice Of Somalia Image
Shaki ma laha in qabiilka aynu sheeganno haddii aynu Soomaali nahay uusan dhibaato mooyee wax khayr ah lahayn loona baahan yahay in laga haro.
Qabiil waa koox bulshada ka mid ah kuwaas oo wadaaga abtirsiin kooban, waxaanay u si qaybsamaan Jilibo, Qoysas ugu danbayn waxaa kala baydha oo reero kala noqda laba Nin oo walaalo ah markay inama badan dhalaan ee inamadiina caruuro sii yeeshaan. Markastoo tirada abtirsiinta qoysku gaadho laba saddex awoow waxay isku badashaa jilib yar oo hoose, dadka walaalaha ahi markay guursadaan ee ay caruur sii dhalaan caruurtoodu waxay isku noqdaan ilmaadeer1, ilmaadeer2, Ilmaadeer3 xaga aabaha. Kadib wixii intaas ka danbeeya waxay isku badashaa “Tol” halkaas oo hadana qabiilkii kor uga unkamo oo uu marka hore noqdo jilib yar oo hoose deedna Qolo,Qabiil.
Qabyaaladu waa hab Somalidu cadeeysatay oo ay mudo dheer ku soo dhaqmayeen kaas oo lagu amaanaayo qoys ama qabiil, qabiil kalana lagu yasaayo laguna caayaayo oo lagu fogeeynaayo. Marka qabyaalada la’oogaayo waa marka larabo in qolo kale la dulmiyo laguna hamiyo jiritaanka qabiilka aad tahay oo qudha lagana diriro jiritaanka bulshada inteeda kale. Qofku malaha ma’adi uu isagu rumaysanyahay inay sax tahay iyo nadaam bulsho oo kale midna ee wixii qabiil kiisa ka soo fula ayuunbuu sax u arkaa waxa umada kalena qalad.
Akhristow miyaad qodobada xaga sare ku qoran & kumanaan kale oo aanan halkan ku soo koobi karin igu diidantahay? Waxaan aamin sanahay inay jawaabtu tahay maya. Hadaba marka aynnu ogsoonahay waxa dawladnimadeena iyo horumarka dalkeena hortaagani inuu yahay qabyaaladda iyo qabiillaysiga uu qof walba iyo qabiil walba wax ku doonaayo ay tahay, ee inaga oo wadaniyiintii wadanka iska lahayd ah, maxaa sababay in kolba ka madax weynaha aynu u doorano uu inoo khiyaameeyaa? ee hantidada umada oo dhami ka gaajoonayso uu siduu doono ugu tagrifalaa? ama inanka yar ee aynu xafiiska cashuuraha ama meel illaha dhaqaalaha ah u dhiibanaa uu xaqeena u lunsadaa? ma iswaydiiseen su’aalahan? mise waxaabad tahay ka aan ka sheekaynaayo?.
DHAGEYSO:- 2/4 Qabiilka iyo Dhibtiisa – Sheekh Boqolsoon, Raximahullah
Runtii waxa aan sheegaayo oo dhami waa wax jira oo aan soo xaqiijiyay, waxba kama helaayo inaan madaxda dalkayga iyo masuuliiinta dalkayga fadeexadeeyo. Xaqiiqadu waxaa weeye inaynu maanta dhibaatada inahaysta hadii aynu soomali nahay dhanka aad doonto kasoojeedo, waxaa inala gudboon in aynu si dhab ah ugu fiirsano mushkilada ina haysata ee waligeedna soo jirtay, oo ka talino bal aayaha ubadka kobabkeena ku jira, kolay inagu nolasheenii baabi’inaye.
DHAGEYSO:- 3/4 Qabiilka iyo Dhibtiisa – Sheekh Boqolsoon, Raximahullah
Waxaad moodaa inaynaan laba socon caalamkan casriga ah. Wali waxaynu ku jirnaa meel mugdi iyo jaahilnimo ah oo dunidu boqolaal sano ka hor soo dhaaftay taas oo ah, qabiil-qabiil & qabyaalad indha la’aan ah. Umada inay ku dhacdo mushkilad ah in ay qofkii ay xilka u dhiibteen khaladka uu galaayo ka joojin kari waayaan ama kalidii taliye qabsado (Dictatorship) waxaa u sabab ah in shicibku kala qaybsan yahay oo iska soo horjeedo. shicibkuna hadii aanu is raacsanayn oo danta guud & dawladnimada ka midaysnayn, cid kastaa gumaysan karta oo xukumi karta, waxy doontana ku samayn karta. Umad midaysan kuma dhacdo dhibaatada inahaysta oo kale.
DHAGEYSO:- 4/4 Qabiilka iyo Dhibtiisa – Sheekh Boqolsoon, Raximahullah
DHAGEYSO:- BARNAAMIJ GAAR AH- Ujeedada Shisheeyaha Soo Duulay